January 10, 2015 - 11:32 AM
News Code : 663779
မကုန်ဆုံးနိုင်သည့် ဟမ်ဒ်နှင့်စနာ(ချီးမွမ်းထောပန မှုအပေါင်း)သည် သနားကြင်နာ ညှာတာပြီး ကရုဏာတော်ရှင် အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ်သခင် အတွက်သာတည်း ။အဆုံးမသတ်သည့်စလာမ် နှင့်ဒရူးဒ်တော်အား မဟာ တမန်တော်မြတ်ကြီး ဟဇရသ် မိုဟမ္မဒ် မွစ်သဖွာ(ဆွ) နှင့် ကိုယ်တော်မြတ်၏ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) အပေါ်သို့ ပို့သပါ၏။ ၎င်းတို့သည် မနုဿလူသား တို့အား ဖဇီလာသ်(ခ)ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှု ၏ ပင်းမအရင်းအမြစ် ဖက်သို့ လမ်းညွန် ပြသတော်မူလေသည်။
ထွန်းလင်းတောက်ပသည့် အစ္စလာမ်သာသနာတော်၏ သင်ကြား ပို့သ မှုများ ၊မအာရေဖ်(ခ) ပညာရေးများ သည် ယနေ့တိုင် စဉ်းစားတွေးခေါ် မှု ဆို သည့် ကောင်းကင်ယံဝယ် ထွန်းလင်းတောက်ပနေပါသည်။
ဤထွန်းခင်းတောက်ပမှုသည် တလောလုံးကို အလင်းရောင် ပေးလိမ့်မည် ဖြစ်ပါသည်။သို့သော် လည်း ဟဂ်ျရာသီ ၌ ပညာရေးများ ၏တောက်ပမှု ၊ထွန်းလင်းမှုမှ ပုံစံတမျိုး ဖြစ်ပေသည်။ ကြည့်ရှု့ သင့်ပေသည်။ ထိုအရာသည်ကား အုပ်စု တစ်သုသည် အခြား တွေးခေါ် စဉ်းစား မှုဖြင့် (စစ်မှန်သည့် ) အစ္စလာမ်သာသနာ တော်၏ မျက်နှာတော် ကို ပြောင်းလဲရန် ကြိုးပမ်းနေပါသည်။
ကျွန်တော်အနေဖြင့် အီရန်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၇ခုနှစ်တွင် နာမ်ပိုင်းဆိုင် ခရီးစဉ် (ခ)ဟဂ်ျ ပြုလုပ်နိုင်စွမ်း ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဤနာမ်ပိုင်းဆိုင် ခရီးစဉ် ၌ လှပသည့် အဖြစ်အပျက်မှန်တစ်ခု ကို ကြုံခဲ့ရပါသည်။ ဤအကြောင်းကို နိဒါန်းအလျင် တင်ပြပါမည်။
ည တစ်ည ကျွန်တော် နှင့် အတူ အီရန် နိုင်ငံသား သူငယ်ချင်း မိတ် ဆွေ ရှီအာ ၊စွန်နီ လေးယောက် မက္ကာ ရွှေမြို့တော် တွင် ဝဟာဘီ အိုလမာ မှ အာလင်မ် တစ်ပါး နှင့်တွေ့ဆုံ စကားပြောကြရန် သွားခဲ့ကြ လေသည်။ယေ ဘုယျအားဖြင့် ၂နာရီခန့် ကြာသည့် တွေ့ဆုံစကား ပြောဆိုမှု အစီအစဉ် တွင် မိတ်ဆွေ ပီသစွာ ၊ချစ်ချစ်ခင်ခင် ၊ရင်ရင်နှီးနှီး စကားပွဲ ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားသည့် အတိုင်း ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
သို့သော် ဤစကားပွဲ အပြီး ဆွေးနွေး နှီးနှောဖလှယ်မှု အစီအစဉ် လည်း ရောက်ရော အသက် ၈၀ခန့် ရှိ ထို ဝဟာဘီအာလင်မ်အနေဖြင့် ရှီအာ နှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်း အချို့ ၏ အဖြေကို ထုံစံအတိုင်း စွပ်စွဲမှုများ ၊ အခြေအမြစ် မရှိမရှိမှုဖြင့် ပေးခဲ့လေသည်။ ထိုအဖြေများသည် ၎င်း၏အမြင် အရ အထောက်အထား ခိုင်လုံပြီး မှန်ကန်ကာ ၊၎င်းယုံကြည်မှု အရာ အထူး စိတ်ဝင်စားဖွယ် ၊လတ်တလေ နားထောင်စရာ ဖြစ်ပေသည်။
စကားပြောဆိုမှု ကို ဤနေရာအထိ ပြောဆိုပြီးပြောလေ၏။ အခုထိ တိုင်အောင် ခင်ဗျားတို့ အီရန်လူမျိုး ရှီအာတွေ ရစူလ်လွလ်လ္လာဟ် (ဆွ) အား အေစ်သေဂါစာ (တိုင်တည်မှု) ကိုပြုလုပ်နေကြတာလည်းဗျား ? ပြီးတော့ ယာရစူလွလ်လ္လာဟ်(ဆွ) လို့ ပြောတုန်းနော် ?
ကျွန်တော်လည်း ချက်ချင်း လင်ငင်း သူကို အဖြေပေးခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ (ရှီအာများသာ) ရစူလ်လွလ်လ္လာဟ် (ဆွ) အား အေစ်သေဂါစာ (တိုင်တည်မှု) မပြုခဲ့ကြပါ။ဆွာဟာဗာ၊သာဝကတော်များ (ရ.သွေ့) တို့လည်း ပြုခဲ့တာပါ။
ဝဟာဘီအာလင်မ်မှ ပြန်ပြောလေ၏။ ဟုတ်ပါတယ် ... မှန်ပါတယ် ... ဒါပေမဲ့ တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) အသက်ထင်ရှား ရှိနေစဉ် အချိန်က အေစ်သေဂါစာ (တိုင်တည်မှု) ပြုခဲ့တာလေ။
ကျွန်တော် လည်းပြန်ဖြေလေ၏ ။ … မဟုတ်ဘူးခင်ဗျား … သာဝက တော် များဟာ အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် သခင်၏ မဟာတမန်တော် မြတ်ကြီး (ဆွ) ဝဖာသ် ဖြစ်တော်မူပြီးနောက် လည်း ဤကဲ့သို့ ပြုခဲ့ကြ ပါ တယ်။
၎င်းအာလင်မ် အနေဖြင့် ဤခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ကို ငြင်း ဆို ပြီး ပြောလေ၏။ ဒါမျိုး အကြောင်းအရာများ မရှိပါဘူး! ဘယ်အထောက် အ ထားနဲ့ ခင်ဗျားက သာဝကတော်များကို စွဲထည့်ရတာလဲဗျား?
ကျွန်တော် လည်း ပြန် အဖြေပေးလေ၏။ ဟဇရစ် အဘူဗကဲရ် ၏ ခေ လာဖသ် လက်ထက်တွင် အဲဟ်လေ့ရဒ်ဒါနှင့် စစ်ဆင်နွဲချိန် မွတ်စလင်မ် စစ် သား များ ၏ ညာသံ မှာ ((ယာမို ဟမ္မဒ်ဒါ )) ဖြစ်ပါတယ်။
သူ အနေဖြင့်ပြန်ပြောလေ၏။ ဒီစကားမခိုင်လုံဘူး၊ အကယ်၍ သက် သေ ထူနိုင်တယ်ဆို အထောက်အထားပြပါ။
ကျွန်တော် လည်း ပြန် အဖြေပေးလေ၏။ … အေဗ်နေကစီးရ် ၊ အေဗ်နေ သိုင်မီယာ၏ တပည့် ကိုယ်တိုင် (البدایه والنهایه) ကျမ်းမှာ ဤ အကြောင်း အရာကို ရေးသား ဆင့်ဆို ထားပါတယ်။
သူ အနေဖြင့်ပြန်ပြောလေ၏။ …ထိုစာအုပ်မှာ ဒါမျိုး အကြောင်း အရာ မပါ၊ပါဘူး။
ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြောလေ၏ … (البدایه والنهایه) ကျမ်းကို ယူခဲ့ပါခင်ဗျား … ကျမ်းစာအုပ်ကို ယူလာပြီးတဲ့အခါ အတွဲ (၆) ကိုဖွင့်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ စာသားလေးကို ဖတ်ပြလိုက်ပါတယ်။
وکان شعارھم یومئذ یا محمداہ !
ကျမ်းကိုး - البدایه والنہایه ٦: ٣٢٩، دارالکتب العلمیة بیروت
အဓိပ္ပာယ် - ထိုနေ့ မွတ်စလင်မ် များ ၏ ညာသံမှာ (ယာမိုဟမ္မဒ်ဒါ) ဖြစ်ပါ လေ၏ ။
ဤသို့ဖြစ် အမှန်တရား နှင့်ရင်ဆိုင်ရချိန်တွင် ထို ဝဟာဘီ အာလင်မ် သည်ချက်ချင်း စကားပြောင်းပြီး ဒီရီဝါယသ် ရဲ့ စနဒ် (အထောက်အထား ) ဟာ အားနည်း တယ်(မမှန်ကန်) ဟုဆိုလေ၏။
ကျွန်တော်လည်း ပြန်ပြောလေ၏။ ဒီစကား ဟာရှေးရ်က် လို စွပ်စွဲ ချက်အပြင် တခြား စကားဖြစ်နေပါတယ်။ ဤ အတွက်ကြောင့် လူကြီး မင်း အနေဖြင့် ဤအကြောင်းအရာ ဟာ သမိုင်းစာမျက်နှာ မှာရှိ နေ တယ်ဆို တာ လက်ခံ ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် လူကြီးမင်း အနေဖြင့် ဤရီဝါယသ် ၏ စနဒ် အားနည်းတယ်လို့ ပြောဆိုနေပါတယ်။ဒါနဲ့ အခြားနောက် တစ်ယောက် အနေဖြင့် လူကြီးမင်း၏ ဆန်ကျင့် ဤရီဝါယသ် ၏ စနဒ် ဟာ မှန်ကန်တယ် ၊ ခိုင်လုံ တယ်လို့ ပြောတာ လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ ထိုပြင်အကယ်၍ အေစ်သေ ဂါစာ နှင့် သာဝစိုလ်ဟာ ရှေးရ်ခ် အက္က်ဘရ် ဖြစ်မည် ဆိုရင် ဘယ်လို လုပ်ပြီး အေဗ်နေကစီးရ် အနေဖြင့် စနဒ် အားနည်းနေတာ ကိုတောင် တမန် တော်မြတ် ကြီး(ဆွ) ၏ သာဝကတော်များ ကို ရှေးရ်က်လုပ်သည်ဟု ဆိုရာ အဖြစ်မျိုး ရောက်သွား အောင် ပြုနေသည့် ပုံစံ မဖြစ်သွား ပါသလော?
ဆွေးနွေးဖလှယ်မှု စကားသည် ဤ အခြေအနေ အထိရောက် လာ သည့် အခါ ထိုဝဟာဘီ အာလင်မ်၏ သား မှ စကားကို ပြတ်ပြီး ပြောလေ ၏။တမန် တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) နှင့် အေစ်သေဂါစာ (တိုင်တည်မှု) ပြုလုပ်ခြင်း သည် ရှေးရ်က် မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျား ။!!
ကျွန်တော်လည်း ပြန်ဖြေလေ၏။ … အဘယ်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အပေါ် စောဒက တက်ရတာလည်းခင်ဗျား ?
ထိုဝဟာဘီ အာလင်မ် အနေဖြင့် ဆွေးနွေးမှုခေါင်းစဉ် အခြား တစ်ခုဖက်သို့ပြောင်းပြီး ပြောလေ၏။
ကျွန်တော်အနေဖြင့်တင်ပြ အစီရင်ခံခဲ့မှုမှန်သမျှ သည် ဝဟာဘီ အာလင်မ်များမှ အာလင်မ် တစ်ပါး ဖြစ်ပြီး ၊၎င်းကိုယ်တိုင် ဝဟာဘီ အယူ အဆ ကိုကာကွယ် သည့် စာအုပ် ၊ မိုဟမ္မဒ်ဗင် အဗ်ဒွလ် ဝဟာဗ် ကို ချီးမွမ်း ထောပန သည့် စာအုပ် ရေးသားထားသူ၏ အတွေး အခေါ်အယူအဆ ဖြစ်ပါ သည်။